nepal oil corporation(nepal oil corporation) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
कर घटाएर पेट्रोल/डिजेलको मूल्य समायोजन
काठमाण्डौ । चौतर्फी दवाबपछि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाउँदै आएको भारी करमा केही कटौति गरी मूल्य समायोजन गरेको छ । पेट्रोलको मूल्य बढेर प्रतिलिटर १९९ पुगेसँगै यसमा जोडिएको करको विषयलाई लिएर सरकार र नेपाल आयल निगमको चर्को आलोचना भएको थियो । प्रतिलिटर पेट्रोलमा कर मात्रै ६५ रुपैयाँ असूलेको भन्दै मूल्य घटाउन सरकारलाई चौतर्फी...
कर हटाएको एकसाता नबित्दै इन्धनको मूल्यमा पुनः भारि वृद्धि
काठमाण्डौ । चौतर्फी दवाबपछि बल्लतल्ल पूर्वाधार कर हटाएको नेपाल आयल निगमले इन्धनको भाउ पुनः बढाएको छ । बिहीबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी निगमले इन्धनको भाउ बढाएको हो । निगमले पेट्रोलमा प्रतिलिटर ८ रुपैयाँ र डिजेल, मट्टितेलमा १२/१२ रुपैयाँ बढाउने निर्णय गरेको हो । निगमले चौतर्फी दवाबपछि पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्यमा...
डिजेल-पेट्रोलको मूल्यमा एकैपटक १० रुपैयाँले वृद्धि
काठमाण्डौ । जनस्तरबाट व्यापक विरोध भई निर्वाचनको मत परिणाममै नकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्लेषणसहित बसेको सरकारले डिजेल र पेट्रोलको मूल्य एकैपटक ह्वात्तै बढाएको छ । सरकारले पेट्रोल र डिजेलको मूल्य प्रतिलिटरमा एकैपटक १० रुपैयाँ बढाएको हो । अब पेट्रोलको खुद्रा मूल्य प्रतिलिटर १७० रुपैयाँ पुगेको छ भने डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य १५३...
काठमाण्डौ । नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य पुनः बढाएको छ। माघ १८ गते मध्यरातिदेखि लागू हुने गरी निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको हो । निगमले जारी गरेको एक सूचनाअनुसार पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटरमा रु. ३ ले बढाएको हो । मूल्य समायोजनपछि अब पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १४२ रुपैयाँ तथा डिजेल र मट्टितेलको मूल्य १२५...
फेरि बढ्यो पेट्रोलियम मूल्य, निगमलाई अझै अर्धमासिक रु. १.२७ अर्ब घाटा
काठमाण्डौ । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा पुनः समायोजन गरेको छ । निगमका अनुसार मंगलबार मध्यरातिदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गरिएको हो । निगमले पछिल्लो समय पटक-पटक मूल्य समायोजन गर्दै आएको छ । पछिल्लो पटक गरिएको मूल्य समायोजनपछि पनि निगमलाई अर्धमासिक रूपमा १ अर्ब २७ करोड भन्दा बढी घाटा रहेको...
आयल निगमको नाफामा ४७% बढीको छलाङ, एकवर्षमै कमायो झण्डै रु. १३ अर्ब
काठमाण्डौ । नेपाल आयल निगमले एक वर्षको अवधिमा करिब १३ अर्ब रुपैयाँ मुनाफा कमाएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गरेर निगमले एक वर्षको अवधिमा १२ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको हो । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४७ प्रतिशतभन्दा बढी हो । निगमले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ८ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ मात्र नाफा कमाएको थियो । लामो समयदेखि ऋण रहेको...
बढ्यो पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको भाउ, अब प्रतिलिटर कति ?
काठमाण्डौ। नेपाल आयल निगमले शनिबार राति १२ बजेबाट लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ। निगमले प्रतिलिटर पेट्रोलमा १ रुपैयाँ तथा डिजेल र मट्टीतेलमा २ रुपैयाँ बढाएको छ। मूल्यवृद्धिसँगै अब पेट्रोलको खुद्रा बिक्रीमूल्य प्रतिलिटर १०८ रुपैयाँ र डिजेल तथा मट्टीतेलको ९१ रुपैयाँ नयाँ मूल्य कायम भएको छ। गत डिसेम्बर १ मा...
झापा–सिलिगुरी पेट्रोलियम पाइपलाइनको काम सुरु, एलपीजी भण्डारण र बोटलिङ प्लान्ट पनि बन्ने
काठमाण्डौ। नेपाल आयल निगमले झापा–सिलिगुरी पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना निर्माण प्रक्रिया सुरु गरेको छ। नेपाल सरकारको गत आर्थिक वर्षको नीति तथा निगमको कार्यक्रमले निर्दिष्ट गरेबमोजिम यो परियोजनाको काम सुरु गरिएको निगमले जनाएको छ। यो परियोजना प्रदेश नं. १ को मागलाई पूर्ति गर्न ९० दिनको भण्डारण क्षमताको हुनेछ। यसअन्तर्गत नेपाल आयल...
दाङको टरिगाउँ विमानस्थलमा बन्ने भयो हवाई इन्धन डिपो, दुई सातापछि निर्माणकार्य सुरु हुने
काठमाण्डौ । दाङको तुलसीपुरमा रहेको टरिगाउँ विमानस्थलमा स्थायी हवाई इन्धन डिपो निर्माण गरिने भएको छ। नेपाल आयल निगमन त्यहाँ हवाई इन्धन डिपो निर्माण गर्न लागेको हो। यसका लागि निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलको नेतृत्वको प्राविधिकको टोलीले हिजो सोमबार डिपो निर्माणस्थल विमानस्थल प्रवेश गर्ने मुख्य गेटको दक्षिणतर्फ...
काठमाण्डौ । नेपाल आयल निगमले फल्स चेम्बर बनाउने पेट्रोलियम ट्याङ्कर संचालकहरुमाथि कारबाहीको प्रक्रिया थालेको छ । त्यस्ता ट्याङ्कर संचालकलाई १५ लाखको दरले जरीवाना तिराउने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको र अन्य थप कारबाही पनि अगाडि बढाइएको निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । मंसिर ३ गते निगमको...
लकडाउनमा सरकारको उपहार, फेरि बढ्यो पेट्रोलको मूल्य !
काठमाण्डौ । पेट्रोलको मूल्य फेरि बढेको छ । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटरमा २ रुपैयाँले वृद्धि गरेको हो । नयाँ मूल्यसूचि मंगलबार मध्यरातिदेखि नै लागू हुनेछ । समायोजित मूल्यअनुसार अब पेट्रोलको मूल्य १०७ रुपैयाँ प्रतिलिटर पुगेको छ । निगमले डिजेल, मट्टितेल, हवाई इन्धन र खाना पकाउने ग्यासको मूल्य भने यथावत नै राखेको छ...
पेट्रोलको मूल्य लिटरमा रु. ५ ले बढ्यो, डिजल र मट्टितेलमा रु. २
काठमाण्डौ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ । मंगलबार रातिदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलमा एकैपटक प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ मूल्य बढाइएको हो । यस्तै, डिजल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँले मूल्य बढाइएको छ । बढेको मूल्यसँगै अब पेट्रोलको नयाँ मूल्य प्रतिलिटर १०१ रुपैयाँ र डिजेल तथा मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर ८७ रुपैयाँ कायम...
आयल निगमद्वारा एकैपटक ५० वटा ग्यास उद्योगको अनुमतिपत्र खारेज (सूचीसहित)
काठमाण्डौ । नेपाल आयल निगमले विभिन्न मितिमा अनुमतिपत्र लिएर निर्माणको प्रक्रिया नै सुरु नगरेका र ग्यास बोटलिङमा ढिलाइ गरिरहेका ५० वटा ग्यास उद्योगको अनुमतिपत्र एकैपटक खारेज गरेको छ। निगमले शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै ती ग्यास उद्योगको अनुमतिपत्र खारेज गरेको जानकारी गराएको हो। सूचनामा विभिन्न मितिमा अनुमति लिएका ५३ मध्ये ३ वटा...